ရန်ကုန်က ကိုသန့်ဇင်က သူ့ရဲ့ (အစဆွဲထုတ်ခြင်း) လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဖတ်သူအတွေး ရေးသူအမြင် (၁) မှာ ရေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုတေဇ လရောင်လမ်း က ယဉ်ကျေးမှု ဖတ်သူအတွေး ရေးသူအမြင် (၂) မှာ ပြန်လည်ရေးသားလာပါတယ်။ အဲ့ဒီဆောင်းပါးတွေမှာ ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက် အယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ မတူညီတဲ့အမြင်အမျိုးမျိုးကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာတော့ ကိုတေဇ လရောင်လမ်း ရဲ့ အမြင်တွေကို ကိုသန့်ဇင် က (အစတစ်စထွက်လာခြင်း) ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ သူ့အယူအဆတွေကို ထပ်မံပြောကြားလာပြန်ပါတယ်။ ရေးသားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကိုသန့်ဇင်နဲ့ ကိုတေဇတို့ရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းလောက်က ဘောပွဲကြည့်ပြီးအိုင်ဒီယာတစ်ခုရတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မေးလ်တစ်စောင် လျှောက်ပို့လိုက်မိပါတယ်။ အစဆွဲထုတ်ခြင်း လို့ နာမည်ပေးပြီးတော့ပါ။ ကျွန်တော်အွန်လိုင်းကနေခင်တဲ့ အထဲမှာ လူသိများတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုအံ့ဘုန်းမြတ်လည်းအပါအ၀င်ပေါ့။ ဒါနဲ့သူ့ ဆီကိုလည်းပို့ ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ သူကနောက်တော့ကျွန်တော်လက်ဆော့ထားတာလေးကို သူ့ ဘလော့မှာသုံးချင်သတဲ့။ စာပို့ လာတာ။ နဲနဲတောင်မြောက်သွားတယ်။ တကယ်ဆို …မင်းခိုက်စိုးစန်တို့မောင်မျိုးမင်းတို့လူထုစိန်ဝင်းတို့ စာတွေတင်နေတဲ့ ဘလော့ဂ်က ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အက်ဆေးကိုတင်ပေးမယ်ဆိုတော့ ဒီလူကြီးအနားမှာရှိရင် ကျဆိမ့် နှစ်ခွက်နဲ့လန်ဒန်တစ်ပွဲလောက်တော့တိုက်လိုက်ချင်သေးသဗျာ။ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အက်ဆေးလေးလဲ ပထမဆုံးအကြိမ် အင်တာနက်ပေါ် ရောက်ဖူးသွားသကိုးဗျ။ ရောက်ရောက်ချင်းကိုဆောက်နဲ့ ထွင်းတာပါပဲဟရို။ ကိုတေဇာ ဆိုတဲ့အက်ဆေး ရေးသမားတစ်ယောက်ကာ ကျွန်တော့်စာလေးကိုလူရာသွင်းပြီးဝေဖန်ထားတာတွေ့ လိုက်ရတယ်။ ( တယ်ဟုတ်တဲ့ ငါပါလား) ကိုအံ့ ရဲ့ဘလော့ဂ် ကနေပြီးတော့ပဲကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောလိုက်ပါရစေ။
ကျွန်တော်က အမေရိကန်ပြည်မှာ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ ကိုဖိနပ်စာကျွေးခဲ့ တဲ့ပြည်ပရောက် တက်ကြွှ လှုပ်ရှားသူတွေကို ဆော်တယ်လို့ ကိုတေဇာက ထင်သွားပုံရပါတယ်။ ထင်မယ်ဆိုလည်းထင်ချင်စရာပါ။ အဲဒီ အချိန်က အဲဒီသတင်းက ဟော့ဖြစ်နေတာကိုး။ ရှင်းပြပါရစေဗျာ။ ပြည်ပရောက်တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေကို ဆော်ရအောင်သူတို့ ကကျွန်တော့်ရန်သူတွေမှမဟုတ်တာဗျာ။ ဦးသိန်းစိန်ကြီးဘက်ကနာရအောင် ကျွန်တော့်ယောက္ခမ လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီအက်ဆေးကိုရေးရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က သူများလုပ်တာမှန်ရင်ဟုတ်တာမဟုတ်တာအပထားလို့ လိုက်လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားကြတဲ့ကျွန်တော့်အမျိုးတွေကို နဲနဲ သိသလောက်လေးသတိပေးလိုက်တာပါ။
မှန်ပါတယ် အစ်ကို။ လူတန်းစားဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်တာကျွန်တော်တော်တော်ရိုင်းသွားပါတယ်။ စေတနာပါတဲ့အမှား လေးမို့ ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါ။ ငနဲလို့ သုံးလိုက်တာကတော့ စာသွက်သွားအောင်ပါ။ အယ်လ်ဇိုင်ဒီ လည်းဒီစာကို ဖတ်ဖြစ်မယ်မထင်လို့ လေ။
နာကျည်းမှုတွေများလာလို့ စိတ်ထွက်ပေါက်အဖြစ် ပေါက်လိုက်တာက စိတ်တော့ခဏတာ ပြေသွားနိုင်တာပေါ့နော်။ ရေရှည်အကျိုးကိုကြည့် ရအောင်ဗျာ။ အယ်လ်ဇိုင်ဒီ ရဲ့ ကိစ္စကိုကြည့်ရင် ဘွတ်ရ်ှပေါ်လစီကို မကြိုက်ရင် သူကသတင်း စာဆရာပဲ ကလောင်နဲ့ ချတာ ဖိနပ်စာထက်ပိုအီတယ်ဆိုတာ ထွက်ပေါက်တစ်ခုထက်ပိုသိသင့်တာပေါ့။ ဟုတ်ဖူးလား။
ဒါလေးလုပ်မိတာထောင်ကျသတဲ့။ကဲ..ကောင်းသလား။ ဒီစာစုလေးကိုကျွန်တော်ရေးတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်ပေးပြီး စည်းကမ်း ရှိလာဖို့ ကိုတိုက်တွန်းချင်တာပါ။ စိုင်းစို်င်းခမ်းလှိုင် ရှိုးပွဲကို ပိုက်ဆံပေးလာကြည့် ပြီး ရေသန့် ဗူးနဲ့ ပေါက်တာစိတ်ထွက်ပေါက်လို့ ကိုတေဇာ ယူဆပါသလားခင်ဗျာ။
၀င်ကြေးတစ်ထောင်ပေးပြိး ကိုယ်အားပေးတဲ့အသင်း၊ တစ်ဖက်အသင်း၊ ဒိုင်လူကြီး နဲ့ ဘောကောက်ပါမကျန်ရလေအောင် မအေ၊နှမ အစုံအလင်နဲ့ အားပါးတရ ကလော်တုပ်ကာ နားကျည်းမှုတွေပြေပျောက်စေတယ်လို့ ယူဆရင်တော့တစ်ခုခုမှား လို့ ဖြင့်နေပါပြီ။ ကိုတေဇာ့ အမြင်ကိုလေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ကိုလေးစားပေးပါလို့ တော့မတောင်းဆိုရဲပါဘူး။ ဒီကောင်ပေါက်ကရတွေလျှောက်ပြောနေတယ်။စေတနာတော့ ပါရှာသားပဲလို့ မြင်ပေးရင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့က သပိတ်မှောက်လူထုကြီး စည်းကမ်းရှိပါလို့ ဆော်သြ နေချိန်မှာ ကျွန်တော်ဖြင့် နို့ တောင်မပြတ်သေးပါဘူး။ သူတို့ သြ၀ါဒလေးကိုကြိုက်လို့ စည်းကမ်းလေးထားဖို့ လက်ဆော့ မိတာပါ။ မကျေနပ်ရင်သူတို့ကို သွားဆဲတော်မူပါ။ ကျွန်တော်ငမိုက်သားက လေသံကြားပြီး သံယောင်လိုက်သူမျှ သာဖြစ်ပါကြောင်း။ ကျွန်တော့်အက်ဆေးလေးကိုဖတ်ပြီး ကိုတေဇာက ကိုရွှေမြန်မာ တွေကိုသောက်ဆင့်မရှိသူတွေလို့ ရှုတ်ချတယ်ထင်သွားပုံရတယ်။ရှင်းပြပါရစေ။
ကျွန်တော်မြန်မာစစ်စစ် အညာသားပါ။ တိုင်းပြည်ကိုချစ်လိုက်ပုံများနောက်ဆုံးထားခဲ့တဲ့ရည်းစားထက်တော့မလျော့ပါဘူး။ ကိုတေဇာ အမြင်ကတ်လောက်တဲ့စကားလေးထပ်ပြောပါရစေ- အမှန်တရားကိုတခါတလေရင်နာနာနဲ့ခါးခါးသီးသီး လက်ခံလိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်။ တစ်ခုတော့ပြောလိုက်ပါရစေ။ တို့လူမျိုးတွေသောက်ဆင့်မရှိကြဘူးကွာ။ သိုးဆောင်း လိုပြောရရင် awareness ဆိုလား ဘာဆိုလားမရှိဘူးလကွာလို့ ပြောပြီ ဘေးထိုင်နေမယ့်လူမျိုးထဲမှာ အီဖေကိုယ် မပါပါဘူး။ အနဲဆုံး ကိုယ့်ညီမလေးကိုတော့ ၀က်သားဒုတ်ထိုးဝယ်ကျွေးပြီး ပြောပြနေပါတယ်။ ဘော်ဒါတွေကို ဘီအီးတိုက်ပြီး အဆက်မပြတ် နားဒုက္ခပေးနေပါတယ်။ ခုတော့စာရေးတာ ပိုးဝင်သွားပြီ။ ကိုအံ့ကြီးကိုပဲ အပူကပ်ရမယ်။နောက်လဲပြောနေမှာပါ။ ဒါပဲလောလောဆယ်လုပ်နေနိုင်သေးသကိုးဗျ။
လူယုတ်မာဟာ ယုတ်မာပါလိမ့်မယ်။ သူတော်ကောင်း ဖြစ်ချင်တဲ့သူက သူတော်ကောင်းအကျင့်ကို ကျင့်ပြိး ယုတ်မာမှုကို နည်းမှန်ကမ်းမှန်ချေမှုန်းကြရင်မကောင်းလားဗျာ။ နော်။ ပစ်ပေါက်ရတာအားကုန်ပါတယ် အကိုရာ.။ ဒီထက်ထိရောက် တာလေးတွေလုပ်ကြရအောင်။ တောင်အာဖရိက တော်လှန်ရေးအခွေကို အေစီ က ငှားကြည့်တော့မန်ဒဲလားရဲ့ နောက်လိုက်တွေဟာ သီချင်းတွေသံပြိုင်ဆိုလို့တညီတညွှတ်တည်း( စည်းလေးကမ်းလေးနဲ့ ) ကန့် ကွက်နေပုံများ မျက်ရည်လည်အောင်အားကျမိပါတယ်။ အကိုရေ…..
မန်ဒဲလားကြီးက အယ်လ်ဇိုင်ဒီလို ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်ပြပြီးစည်းရုံးသွားတာမဟုတ်ရပါ။ စိတ်ထွက်ပေါက်အဖြစ် လုပ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူမည်းတစ်မျိုးသားလုံးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလေး ရှိပါသဗျာ။ အကိုရေ… စိတ်ထွက်ပေါက်လေးရရုံနဲ့ တော်ပလားဗျာ။ သန်းငါးဆယ်နီးပါးတစ်နေ့ ဝင်ငွေတစ်ဒေါ်လာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံ ဖီနပ်နဲ့ ပေါက်လိုက်ရင်ရွှေမိုး၊ငွေမိုး ရွာမှာလားဟင်။ ဒီလိုသာဖြစ်ရိုးဆို ကျွန်တော်ရှေ့ ဆုံးကနေ ဖိနပ်စုတ်တွေလိုက်စုမယ်။
absolute truth ဆိုတာမရှိတာကို လက်ခံပါတယ်။ တချို့ အမှန်တရားတွေဟာ ခုထိလည်းမှန်နေဆဲလေ။ မြတ်စွာဘုရား မရှိတော့တာနဲ့ (၃၈) ဖြာမင်္ဂလာက အသုံးမ၀င်တော့ဘူးလားဗျ။ လင်ကွန်းပြောတာ ခုလဲမှန်တယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ .ယူဆမိနေပါတယ်ဗျာ။ မမှန်တော့ဘူးလို့ ထင်တဲ့သူရှိရင်လည်း လေးစားပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သူ့ စကားကို ယူသုံးလိုက်တာ ပြည်သူကို နှိမ်နှိမ်ပြုပြုပြောချင်လို့ မဟုတ်ပါ။ တို့ လူမျိုးတွေ့ ဒီ့ထက်တန်တဲ့အစိုးရ ရသင့်တယ်နော်လို့ သတိပေးလိုက်တာပါ။ နောက်ဆုံးပေးတဲ့ဆုကြိုက်တယ်…ဘာတဲ့ကြိုးစားနိုင်ပါစေတဲ့လား…. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့် ပါစေ…………..
Article, စာနယ်ဇင်း, ယဉ်ကျေးမှု, အကျဆေး, နိုင်ငံရေး
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း
One thought on “ယဉ်ကျေးမှု ဖတ်သူအတွေး ရေးသူအမြင် (၃)”
မှန်လိုက်လေ ရဲဘော်ကြီးမောင်သန့်စင်ရယ် ဖတ်သွားတယ်ဗျ ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ :)